Siideynta Wararka: Ganacsigu wuxuu ugu deeqayaa $ 485,000 dib u eegista deegaanka ee mashaariicda waxsoosaarka bariga Washington - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Siideynta Wararka: Ganacsigu wuxuu ugu deeqayaa $ 485,000 dib u eegista deegaanka ee mashaariicda wax soo saarka bariga Washington
Pend Oreille County, Spokane County, Spokane Valley iyo Walla Walla ayaa abaalmarin lagu siiyay falanqaynta deegaanka si ay u taageeraan horumarinta dhaqaalaha ee goobaha wax soo saarka la soo jeediyay.
Olympia, Wash - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday $ 485,000 oo ah deeqo qorsheyn horumarsan si loogu caawiyo afar mashruuc oo wax soo saar oo laga soo jeediyay bariga Washington. Deeqaha ayaa ka caawin doona Pend Oreille County, Spokane County, magaalada Spokane Valley iyo Walla Walla County inay horay ugu sii socdaan falanqaynta deegaanka iyo oggolaanshaha howlaha la xiriira horumarinta ee afar qaybood oo muhiim u ah dhaqaalaha: teknolojiyad nadiif ah, aerospace, wax soo saarka kaynta ama beeraha iyo soo saarista cuntada, iyo waxsoosaar culus.
Gobolka Pend Oreille - $ 250,000 deeq u dhiganta $ 100,000 oo ah lacagaha degmada ee loogu talagalay waxqabadyada ay ka mid yihiin wacyigalinta dadweynaha, iskuduwaha ogolaanshaha deegaanka, dhul qoyan iyo daraasaadka gaadiidka, kheyraadka dhaqanka iyo qiimeynta dhulalka dhirta, injineernimada, qorsheynta, barashada aasaasiga deegaanka iyo maareynta mashruuca. Horumarinta la soo jeediyay waa xarun $ 300-milyan ah oo loogu talagalay soo saarida silikoon ka sameysan ciida goobta warshadda Shirkadda Ponderay Newsprint. Marka la dhammaystiro hawlgal buuxa - qiyaastii 170 shaqo oo joogto ah ayaa la saadaalinayaa.
Magaalada Dooxada Spokane - $ 114,200 deeqda oo u dhiganta $ 55,000 maalgashi magaalada ah oo loogu talagalay waxqabadyada lagu hagaajinayo oggolaanshaha deegaanka ee aagga warshadaha waqooyi-bari ee magaalada. Goob 40-hektar ah oo ku dhex taal aagga 840-hektar ayaa loo soo jeediyey xarun wax soo saar culus oo ay ku jiraan qiyaastii 110,000 oo fiit oo laba jibbaaran oo wax-soo-saar ah, 115,000 cagood oo laba jibbaaran oo kayd ah, tareen cusub oo cusub, baarkin dhigasho si ay u helaan hawlo ganacsi iyo ilaa 150 shaqaale ah
Gobolka Walla Walla - $ 100,000 deeq u dhiganta $ 20,000 maalgashi degmo si loogu diyaariyo daraasad suuragalnimada biyaha wasakhda ah ee loogu talagalay Wallula Gap Business Park oo ku taal dekedda Walla Walla. Ku dhow Wadada 12 iyo tareen isku xira labada waddo, goobta ayaa horey u dhameystirtay warbixinadii qadiimiga, cilmiga dhirta iyo bayoolojiga. Daraasaddu waxay wax ka qaban doontaa kharashyada injineernimada, helitaanka waddada toosan ee loo baahan yahay, qaabeynta kaabayaasha, beddelka qashin-qubka, iyo mudnaanta horumarinta iyo qorsheynta.
Gobolka Spokane - $ 20,800 deeqda oo u dhiganta $ 48,200 oo ah lacagaha maxalliga ah si loo dhammaystiro hannaanka oggolaanshaha Maamulka Duullimaadka ee Federaalka (FAA) si loo sii daayo 40 hektar oo ka mid ah garoonka diyaaradaha aan duulimaadka ahayn ee u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee Spokane oo loogu talagalay $ 90.5 milyan oo mashruuc maalgashi ah. Dhulka waxaa laga iibin doonaa shirkad soo saarta iyo qaybinta aerospace, iyadoo saamayn lagu qiyaasay ku yeelan doono bulshada 300 oo shaqo ah.
“Gobolka Washington wuxuu ku maneystay dhaqaale iyo ilo kala duwan si loo soo jiito loona joogteeyo ganacsiyada iyo shaqooyinka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, fursadaha koritaanku waxay u muuqdaan kuwo aad uga duwan xeebta ilaa magaalooyinka Puget Sound ilaa Palouse iyo wixii ka baxsan, ”ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Brian Bonlender. “Maalgashiyadan istiraatiijiyadeed waxay xoojinayaan bulshooyinka bariga Washington. Wadashaqeynta xoogan ee dowlada iyo shirkadaha gaarka ah waxay sifeyneysaa hanaanka sharciyeynta waxayna siineysaa ganacsiyada iyo dowladaha hoose aaladaha ay ugu baahan yihiin si ay go'aano uqaataan isla markaana horay ugu socdaan.
"Lacagtani waa kuwo muhiim u ah in aan taageerno ballanqaadkeenna ku aaddan ka-qaybgalka dadweynaha ee waqtiga iyo macnaha leh ee fursaddan si loo hubiyo maal-gashiga cusub ee muhiimka ah iyo shaqooyinka bulshadeenna," ayuu yiri Wakiilka Mike Manus, oo ah guddoomiyaha Guddiga Guddiga ee Pend Oreille County. "Gaar ahaan, waxaan rajeyneynaa inaan la xiriirno Qabiilka Kalispel si aan u sameyno qorshe howleed kaas oo hubinaya in dhammaan su'aalaheenna ku saabsan saameynta ay ku yeelan karto deegaanka laga jawaabo."
Nidaamka xulashada tartanka ayaa keenay afarta qof ee deeqda ka helay sagaal codsi oo weydiisanaya wadar ahaan ku dhowaad $ 1 milyan. Sharci dejinta 2016 waxay siisay awoodda barnaamijka Adeegyada Maareynta Kobaca Ganacsiga inay abaalmarin siiso $ 500,000 si ay u caawiso magaalooyinka iyo gobollada bariga buuraha Cascade si loo hormariyo falanqaynta deegaanka iyo oggolaanshaha howlaha ka socda iyo hareeraha goobaha wax soo saarka ee hadda jira iyo kuwa waaweyn iyo xarumaha kale ee kobaca dhaqaalaha ee muhiimka ah.
Shuruudaha loo adeegsaday qiimeynta codsiyada waxaa ka mid ahaa cabirka, u diyaar ahaanta in la sii wado, deymaha maaliyadeed ee maxalliga ah, shaqooyinka la hayo ama la abuuray, mashaariic muhiimad weyn ku leh gobolka oo dhan, adeegsiga goobaha bannaan ee warshadaha banaan ama aan laga faa'iideysan, taageerada ururada horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah iyo is waafajinta xeeladaha horumarinta dhaqaalaha gobolka.
Soo-jeedinta aan ku guuleysan maalgelinta waxay ku taal magaalooyinka Spokane, Othello, Grandview iyo Union Gap.
BonlenderDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahaXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← War-Saxaafadeed: Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maal-gelinayaa in ka badan $ 1.9 milyan afar beel oo reer miyi ah WARAR CUSUB: Xarunta Tikniyoolajiyadda Dib-u-warshadaynta Isku-darka Gobolka Washington ayaa ku guuleysatay deeq $ 500K “Innovation Accelerator” ah, oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay wax soo saarka tafaariiqda ee Matxafka Duulimaadka →